UEFA oo Arsene Wenger gorada u galisay ganaax aad u culus ka dib… (Sawiro) – SBC
UEFA oo Arsene Wenger gorada u galisay ganaax aad u culus ka dib… (Sawiro)
Tababaraha kooxda Arsenal ee waqooyiga magaalada London ka dhisan Arsene Wenger ayaa ganaax adag gorada waxaa u galisay ururka ciyaaraha kubada cagta Yurub ee UEFA ka dib markii lagu eedeeyey in uu ku kacay dhaqan xumo kuna xadgudbay ganaax horey loogu soo rogay.
Ganaaxa Wenger ayaa ka dhigan in uu sii wajahayo xaalado adag oo jawhwareer & walwal ah oo ka haysta kooxda Arsenal oo uu maamulayey mudo ka badan 10 sano, taasi oo ay soo foodsaareen guuldarooyin koobab la’aan ah mudo 6 sano, Laacibiintii oo ka hayaantey & boorsada lacagta oo uu ku dhegan yahay oo laga la’yahay soo iibso ciyaaryahano qibrad sare leh.
Ganaaxa lagu soo rogay Wenger ayaa ah inaanu soo istaagi karin soohdinta tababarayaasha ee garoonka laba kulan oo ka mid ah ciyaaraha Champions League, isla markaana Arsenal ay bixiso lacag gaaraysa 10 kun oo Euro.
Arsenal ilaa beri ayay haysataa inay ka qaadato Appeal ama racfaan ganaaxan waxaana hadii uu dhaqan galo ganaaxaasi uu seegi doono Arsene Wenger kulanka lugta labaad ee Arsenal ay Arbacada la ciyaarayso kooxda Talyaaniga ee Udinese oo lugtii hore guriga Arsenal loo dhiibay hal gool oo uu saxiixay ciyaaryahan Theo Wolcott.
Sharciga UEFA ee ganaaxa ayaa dhigaya in tababaraha ganaaxa aanu kooxdiisa wax wadahadal ah la yeelan kooxdiisa ka hor ciyaarta & inta ciyaartu ay socoto.
Ciyaartii 16-kii bishan August ka dhacdey guriga Arsenal waxaa laga arkey shaashadaha Telefishinada Arsene Wenger oo fariimo u gudbinaya tababaraha kooxda koowaad Boro Primorac iyadoo fariintaasi loo gudbinayey kuxigeenka Pat Rice oo isagu hayey masuuliyada maamulka kooxda.